China L miendrika fefy tariby miorina amin'ny vy ho an'ny tranobe maritrano Mpanamboatra sy mpamatsy | Pro Fefy
Ny dingan'ny famokarana fefy tariby miendrika L dia mitovy amin'ny fefy vy hafa. Izy io dia fefy vy izay mampiasa tariby vy mifatotra voalohany ary faharoa mila milina miondrika mba hanao L miendrika ambony sy ambany amin'ny fefy. Farany, namarana azy tamin'ny fonosana vovoka. Izy io dia fefy matanjaka avo lenta sy maharitra ary fefy tsara tarehy ihany koa.
PRO.Fence dia manome fefy tariby miendrika L mihetsiketsika amin'ny haitao ny teknolojia famafazana elektrostatika sy ny fitaovana avo lenta "Akson". Mahatonga ny fefinay ho tsara amin'ny fanoherana ny harafesina, ary miloko tsara tarehy. Manoro hevitra ny lokon'ny volondavenona sy fotsy mainty izahay, izay malaza koa eo amin'ny tsenanay. Mety amin'ny tranobe ara-barotra io. Ny endrika malefaka sy ny loko dia afaka mifanaraka amin'ny manodidina ny tranobe tsara.
Ny fefy tariby miendrika L dia miangona amina paositra efajoro ary mitaky ny fototra mivaingana. Matetika izy io dia ampiasaina ho toy ny fiarovana sy fefy haingon-trano amin'ny tranom-barotra, trano fonenana, toeram-piantsonana.
Harato: 60 × 120mm / 60 × 150mm
Paositra: 30 × 40 × 1.5mm
Vita: vovoka mifono (Brown, Black, White, Green, Yellow, Gray)
1) Jery mahasarika
Ny endrika malefaka L miolakolaka eo an-tampon'ny fefy tsy misy tendrony tariby maranitra, ary ny loko miadana dia mety handravaka ny tranonao.
Izy io dia vita amin'ny tariby vy misy fihenjanana ambony ary mamarana azy amin'ny fonosana vovoka feno hahatonga ity fefy ity haharitra kokoa ary hisorohana ny harafesina sy ny harafesina.
Ny fomba fametrahana mivantana ny paosin-javatra iray dia hanafohezana ny vanim-potoana fananganana sy hitehirizana ny vidin'ny asa ihany koa.
Item TSY: PRO-10 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: C-miendrika vovoka mifono vy miharo harato ho an'ny zavamaniry mahery
Manaraka: Trolley tranofiara mavesatra ho an'ny fitaterana sy fitahirizana fitaovana （3 Sided）